Odayaal dhaqameed lagu xiray degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan (AKHRISO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Odayaal dhaqameed lagu xiray degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan (AKHRISO)
Wararka naga soo gaaraya degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay xabsiga u taxaabeen 10 odayaal dhaqameed oo la sheegay inay ka qeyb-galeen xaflad ay Al-shabaab ku casuumtay.
Taliyaha ciidamada dowladda ee degmada Jalalaqsi Faarax Aadan Gaafoow oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in odayaasha la xiray lagu soo eedeeyay inay ka qeyb-galeen xaflad ka dhacday deegaanka Buurweyn oo ay soo qaban-qaabiyeen Al-shabaab.
Xafladaasi ayaa la sheegay inay ahayd mid lagu caleemo saarayay oday dhaqameed taageersan Al-shabaab, waxayna odayaashaasi haatan ku xiran yihiin saldhig ku yaalla degmada Jalalaqsi.
“Odayaasha lagu xiray degmada Jalalaqsi waxay ku eedeysan yihiin inay ka qeyb galeen xaflad ka dhacday deegaanka Buurweyn oo lagu caleemo saarayay oday dhaqameed taageersan Al-shabaab” Sidaas waxaa yiri Faarax Aadan Gaafoow.
Illaa iyo haatan lama oga waxa laga yeeli doono arrintooda, inkastoo odayaashaasi laga yaabo inay cabsi ay ka qabeen Al-shabaab darteed ay xafladaasi uga qeyb-galeen.